Cryptopay डेबिट कार्ड समीक्षा - Bitcoin कार्ड तुलना 2018
Bitcoin डेबिट कार्ड तुलना 2018 Bitcoin Credit Card – Buy Bitcoin with Credit Card
Bitcoin डेबिट कार्ड सोधिने प्रश्न
Cryptopay डेबिट कार्ड समीक्षा
Cryptopay विश्वव्यापी आफ्नो bitcoins खर्च गर्न सजिलो तरिका प्रदान. मुद्रा अनुवाद streamlining र बजार आन्दोलनहरु विरुद्ध रोकन सल्लाह दिछन गर्दा प्रयोगकर्ताहरूले Bitcoin नेटवर्क को लाभ लाभ उठाउन सक्छौं. Cryptopay द्वारा प्रस्तावित सेवाहरू प्रयोगकर्ता भुक्तानी Bitcoin छिटो र सहज पहुँच दिन्छ. कम्पनी द्वारा जारी भिसा डेबिट कार्ड Bitcoin संग ब्याक मान्छे एटीएम देखि अनलाइन खरिद वा withdrawals मा प्रयोग गर्न सक्ने मात्रा.
सेवाहरू Cryptopay प्रदान
प्रयोगकर्ता खरिद गर्न सक्नुहुन्छ, फ्लेक्स खाताहरूमा Cryptopay गरेको Bitcoin वालेटमा bitcoins बेचन र स्टोर. प्लेटफर्म गर्न बैंक खाता जडान पछि, प्रयोगकर्ता EUR रूपान्तरण गर्न सक्छौं, GBP वा USD bitcoins मा मात्रा. वालेट ग्राहकहरु नै खाता भित्र विभिन्न मुद्रा रकम भण्डारण दिनु तरिकामा डिजाइन गरिएको छ. यो पठाउने र धेरै अधिक आरामदायक अनुभव विदेश पैसा प्राप्त बनाउँछ.
Cryptopay मुद्दाहरू भिषा ती owning bitcoins लागि अफलाइन खर्च अवसर प्रदान गर्न कार्डहरू डेबिट. कार्ड सबै POS टर्मिनलहरु जहाँ भिषा कार्ड स्वीकृत छन् मा स्वीकृत छन्. यो ग्राहकहरु या त व्यापारीहरू लाखौं विश्व-विस्तृत मा अनलाइन वा अफलाइन भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ मतलब. चिप्स र पिन छ कि परम्परागत भिषा कार्ड बाहेक, प्रयोगकर्ता पनि भर्चुअल कार्ड आदेश गर्न सक्छ, जो प्लास्टिक कार्ड रूपमा व्यापक रूपमा स्वीकृत छन्.
खाता शेष साधारण बैंक खाता स्थानान्तरण संग topped गर्न सकिन्छ. बैंक भित्र योग्य खाताहरू 28 युरोप मा SEPA देशहरूमा, तर कार्ड यूरोजोन बाहिर पनि आदेश गर्न सकिन्छ. यो बिन्दुमा, संयुक्त राज्य अमेरिका वा भारत ग्राहकहरु Cryptopay द्वारा जारी डेबिट कार्ड आदेश गर्न सक्षम छन्. संयुक्त राज्य अमेरिका बाहेक, कम्पनी थप समावेश 120 आफ्नो सेवाहरूबाट देशहरूमा, अफ्रीका र मध्य-पूर्व देशहरूमा जोडी सहित.
मानक सेवा चयन गरिएको छ भने भिसा डेबिट कार्ड अन्तर्राष्ट्रीय निःशुल्क ढुवानी गर्दै. आदेश वेबसाइट मार्फत भएपछि, ग्राहक भित्र डेबिट कार्ड प्राप्त 2-3 युरोप मा सप्ताह र 3-5 शब्द बाँकी हप्ता. को एक्सप्रेस वितरण विकल्प को मामला मा चुनिएको छ, ग्राहकहरु भित्र आदेश कार्ड प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ 3-10 एक अतिरिक्त शुल्क लागि दिन 75 अमेरिकी डलर.
मूल्य निर्धारण र शुल्क
प्लास्टिक कार्ड लागत 15 अमेरिकी डलर, भर्चुअल कार्ड हो 2.5 अमेरिकी डलर. प्लास्टिक कार्ड प्रमाणित प्रयोगकर्ताहरू दैनिक फिर्ता गर्न अनुमति 2,000 एटीएम र छ देखि USD 10,000 एकल शीर्ष अप मा USD सीमा. तर त्यहाँ कुल withdrawals मा न कुनै सीमा छ, न त ब्यालेन्स लोड मा शीर्ष अप मात्रा मा.
Cryptopay पनि प्रमाणिकरण बिना यसको सेवा प्रयोग गर्न विकल्प प्रदान गर्दछ यो प्रयोगकर्ता आधार. त्यस अवस्थामा एटीएम withdrawals र topups लागि तथापि सीमा एकदम सानो हो. अप्रमाणित प्रयोगकर्ता फिर्ता हुन सक्छ 400 एटीएम देखि USD दैनिक, तर केवल को कुल रकममा 1,000 पहुँच को जीवनकालमा भर USD.
दुवै प्रमाणित र अप्रमाणित प्रयोगकर्ताका लागि, ग्राहकहरु एक दिन मात्र दुई पटक एटीएम देखि नगद झिक्न गर्न सक्षम छन्. अर्कोतीर, प्रयोगकर्ताहरूको दुवै प्रकार Cryptopay डेबिट कार्ड अनलाइन खरिदका लागि असीमित समय प्रयोग गर्न सक्छ.
Cryptopay शुल्क 1% बाट र फिएट मुद्राहरू मा सबै Bitcoin रूपान्तरण मा. सस्ता तरिका मा-साइट Cryptopay लोड उपकरण संग खाता ब्यालेन्स लोड गर्न छ, किनभने अन्यथा मंच एक अतिरिक्त शुल्क 0.99% तेस्रो-पक्ष सेवाहरूमा प्रयोग. उतराई कार्ड को $ / € / £ अतिरिक्त शुल्क छ 0.10 छेउको 1% चार्ज.
त्यहाँ एक अतिरिक्त छ रूपमा प्रयोगकर्ताहरूले Cryptopay कार्ड को आधार मुद्रा ध्यान पर्छ 3% विदेशी लेनदेन मा चार्ज. ग्राहकहरु तिर्न वा यो कार्ड को आधार मुद्रा भन्दा फरक मुद्रामा पैसा झिक्न गर्न चाहन्छ भने 3% विदेशी कारोबार शुल्क चार्ज छ.
यूरो मा घरेलू र अन्तर्राष्ट्रीय कारोबारका लागि एटीएम withdrawals को शुल्क नै € छन् 2.25. को Cryptopay कार्ड को आधार मुद्रा को एटीएम प्रदान के भन्दा फरक छ तर यदि, त्यहाँ GBP र USD मा अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारका लागि एक उच्च शुल्क छ.
यो Bitcoin मूल्यहरु धेरै प्रिमियम मा कारोबार छैन र बोली / प्रस्ताव मार्जिन उचित छ. उदाहरणका लागि, लागि प्रस्ताव bitcoins Cryptopay 775.84 - 783.49 USD बोली-सोध्न, को BTCUSD मूल्य हुँदा 785.94 कोइनबेस मा र 779.67 Bitstamp मा.
त्यहाँ उपयोग र Cryptopay डेबिट कार्ड लोड लागि लागू हुन्छन् भनेर शुल्क एक नम्बर हो.
Cryptopay प्लास्टिक प्रिपेड कार्ड – मूल्य र शुल्क
कार्ड मूल्य र शुल्क
कार्ड मूल्य € 15.00 £ 15.00 $15.00
मानक विश्वव्यापी वितरण मुक्त मुक्त मुक्त
विश्वव्यापी वितरण व्यक्त € 70.00 £ 50.00 $75.00
घरेलु एटीएम कारोबार € 2.25 £ 1.75 $2.50
अन्तर्राष्ट्रिय एटीएम कारोबार € 2.75 £ 2.25 $3.50
विदेशी कारोबार शुल्क 3% 3% 3%
शुल्क लोड 1% 1% 1%
तेस्रो-पक्ष लोड शुल्क 1.99% 1.99% 1.99%
Cryptopay भर्चुअल प्रिपेड कार्ड – मूल्य र शुल्क
कार्ड मूल्य € 2.50 £ 2.50 $2.50
Cryptopay वेबसाइटमा एक चिटिक्क छ, एकीकृत नीलो नजर. नेभिगेसन साइटमा एकदम सरल छ.
दर्ता मात्र एक मिनेट लाग्छ. नाम प्रदान पछि, इमेल ठेगाना र पासवर्ड, प्रयोगकर्ताहरूले मंच मा लगइन गर्न सक्नुहुन्छ. खाता प्रयोगकर्ता प्रस्तुत हुनुपर्छ प्रमाणित गर्न सरकार आईडी कार्ड जारी (राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र वा ड्राइभिङ लाइसेन्स) र निवास को एक प्रमाण. निवास बैंक कथन प्रमाण लागि, उपयोगिता बिल, कर फिर्ती वा सरकार निवास को प्रमाणपत्र स्वीकार छ जारी. प्रमाणिकरण केही घन्टा लाग्छ.
लग इन पछि, प्रयोगकर्ता खाता को ब्यालेन्स हेर्न सक्नुहुन्छ. प्रत्येक मुद्रा (EUR / GBP / USD) छुट्टै Bitcoin ठेगाना जहाँ ग्राहकहरु Bitcoin शेष लोड गर्न सक्नुहुन्छ दिइएको छ. त्यहाँ ठेगाना Bitcoin पैसा स्थानान्तरणका लागि छुट्टै ट्याबहरू छन्, कार्डहरू लोड र उतराई. को शेष अर्को Bitcoin वालेटमा वा पठाउन खण्ड अन्तर्गत लिङ्क बैंक खाता गर्न फिर्ता लिया गर्न सकिन्छ. सन्दर्भ ट्याब let एक प्राप्त गर्न सेवा गर्न मित्रहरूलाई आमन्त्रित गर्न प्रयोगकर्ता हो 10% राजस्व साझेदारी गर्दा मित्र एक लागि Cryptopay डेबिट कार्ड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ 25% छुट.
मामला मा कुनै पनि प्रश्न उठ्न, त्यहाँ सोधिने प्रश्न खण्डमा खोजी कार्य हो. यदि कुनै पनि मुद्दा इमेल द्वारा समाधान गर्न सकिँदैन Cryptopay पनि प्रत्यक्ष कुराकानी समर्थन प्रदान गर्दछ.
प्रयोगकर्ता रुचि देखिन्छ Cryptopay धेरै. तिनीहरूले वेबसाइट संग व्यापार विचार प्रशंसा. उल्लेख मात्र नकारात्मक प्रतिक्रिया बेलायत समय क्षेत्र मा ग्राहक समर्थन काम मात्र विदेशी ग्राहकहरु को लागि एक टाउको दुखाइ हुन सक्छ थियो.
Cryptopay खाता सीमा
अनलाइन लेनदेनको मूल्य
Unverified / प्रमाणित €1,000.00 / असीमित £800.00 / असीमित $1,000.00 / असीमित
तेस्रो-पक्ष भार उपलब्ध
Unverified / प्रमाणित कुनै / हो कुनै / हो कुनै / हो
अधिकतम एकल शीर्ष-अप मूल्य
Unverified / प्रमाणित €1,000.00 / € 10,000.00 £800.00 / £ 8,000.00 $1,000.00 / $10,000.00
अधिकतम दैनिक लोड
Unverified / प्रमाणित €1,000.00 / € 20,000.00 £800.00 / £ 16,000.00 $1,000.00 / $20,000.00
अधिकतम जीवनकालमा लोड
अधिकतम जीवनकालमा माल सामान उतार्नु
प्रति दिन भार
Unverified / प्रमाणित2/ असीमित2/ असीमित2/ असीमित
Cryptopay.me अक्टोबर मा स्थापित गरिएको छ 2013 दुई युवा Bitcoin उत्साहित. जर्ज Basiladze वित्त मा एक एमएससी छ, वित्तीय प्रणाली को एक गहन ज्ञान संग रूसी लगानी कम्पनीहरु मा धेरै अनुसन्धान विश्लेषक अनुभव थियो. दिमित्री Gunyashov छ एक 7+ निर्माण ई-वाणिज्य कारोबार र सफलतापूर्वक वर्ष इतिहास विगतमा धेरै भुक्तानी प्रणाली को विकास कार्य व्यवस्थित. यस कम्पनीको मुख्यालय लन्डन मा आधारित छ, को मान्छे आजकल बेलायत बाट व्यापार प्रबन्ध छन्. कम्पनी पहिले नै बढी जारी गरेको छ 37,000 डेबिट कार्ड, उनीहरुसँग छ 167,000 सक्रिय प्रयोगकर्ता शब्द-विस्तृत सञ्चालन गर्ने 100,000 प्रति महिना Cryptopay सेवाहरू संग लेनदेन.
Cryptopay को सबै भन्दा ठूलो लाभ तिनीहरूले लागि तीन प्रमुख मुद्राहरू EUR सेवाहरू प्रदान गर्ने छ, GBP र USD र तिनीहरूले भिषा कार्ड मुक्त संसारमा-विस्तृत ढुवानी गर्दै. वेबसाइट राम्रो तरिकाले डिजाइन निर्माण. तथापि किनभने मूल्यहरु तालिका अलिकति औसत भन्दा माथि प्रतियोगिहरु तुलना गरिएको छ, प्रयोगकर्ताहरूले Cryptopay मार्फत त्यसो गर्न सबै तीन मुद्राहरू र यो कि लायक प्रयोग गर्नेछ कि विचार गर्नुपर्छ.